ပညာသင်တာ စာတတ်ဖို့ သက်သက်လား . . . – Good Health Journal
ပညာသင်တာ စာတတ်ဖို့ သက်သက်လား . . .
ကလေးတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုး ထောင်တဲ့နေရာမှာ အန္တရာယ်မဖြစ် အောင်ကာကွယ်ပေးတာ၊ ကျန်းမာရေး ကောင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပေးတာ၊ လို အပ်တဲ့အထောက်အပံ့ပေးတာ စတာ တွေ လုပ်ပေးရင်လုံလောက်ပြီလို့ မတွေး စေချင်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ အခြေခံ ဂရု စိုက်ပေးတာဖြစ်ပြီး ပျိုးထောင်တဲ့နေရာ မှာတော့ ကလေးကို လမ်းမှန်ရောက် အောင် တည့်မတ်ပေးဖို့ဆိုတာတွေက ပါလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပညာရေးပါ။
ကလေးငယ်အတွက် ပညာရေးဆို တာ အတန်းစာတစ်ခုတည်း တတ်ဖို့က စာသင်တာ မဟုတ်သလို စာတတ်တယ် လို့လည်း မခေါ်နိုင်ပါဘူး။ လမ်းလျှောက် တတ်စအရွယ် ကလေးတွေ၊ စကားပြော တတ်စအရွယ်ကလေးတွေနဲ့ နည်းနည်း ကြီးသွားတဲ့ကလေးတွေမှာလည်း သင် ယူပုံချင်း မတူပါဘူး။ ကလေးငယ်တွေ အနေနဲ့က စူးစမ်းမယ်၊ ကစားမယ်၊ အရာ ရာတိုင်းက အသစ်အဆန်းတွေပဲ ဖြစ်နေ တာမို့လို့ မသိတာတွေ လေ့လာမယ်၊ သူတို့အနီးနားမှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ ခမေနါငလနမျ တွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆို ဆက်ဆံမယ် စတာတွေကနေ သင်ယူ တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကလေးတွေအတွက် သင်ယူနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ မိဘ၊ မိသားစု၊ caregivers၊ ဆရာ၊ ဆရာမ တွေဟာ အဓိက ဖွံ့ဖြိုးမှုနယ်ပယ် ငါးရပ် ဖြစ်တဲ့ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စာရိတ္တ၊ မိတ္တ၊ ဘောဂ စတာတွေ ကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးဖို့ ကြိုးပမ်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကလေး ငယ်တွေ ပညာသင်ကြားရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး ငယ်တိုင်းအတွက် သူတို့လုပ်တဲ့activities တိုင်းမှာ သင်ယူတဲ့နယ်ပယ် အမျိုး မျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာ – ကလေးနဲ့အတူ အရွယ်အစားမျိုးစုံရှိတဲ့ ဘလော့အတုံး တွေကစားပေးတာဟာ ကလေးငယ် အတွက် သင်္ချာအတွေးအခေါ်ကို ရစေပြီး အရွယ်အစားမျိုးစုံရှိတဲ့ ခွက်တွေထဲမှာ ရေဖြည့်တမ်းကစားတာက ကလေးငယ် အတွက် သိပ္ပံအတွေးအခေါ်ကို ရစေပါ တယ်။
ကလေးတွေသင်ယူနိုင်မယ့် နည်း လမ်းတွေကို ဘက်ပေါင်းစုံက လေ့လာပြီး ပုံသေ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း မဟုတ် ဘဲ ကလေးရဲ့ စွမ်းရည်အသစ်တွေ ထွက် ပေါ်လာဖို့အတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့ ပတ် ဝန်းကျင်၊ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ အတွေ့အ ကြုံကောင်းတွေ ရရှိစေဖို့ ထပ်ဖြည့်ပေး ရပါမယ်။ ဒီအတွက် ကလေးငယ်နဲ့ အနီး ကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်သူတွေက ဝိုင်း ဝန်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
ကလေးငယ်ကို အနီးကပ်စောင့် ရှောက်ပေးတဲ့သူက ကလေးငယ်က ဘယ်လိုသင်ယူတယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့် ဆင့်က ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာတွေ သိ ထားရင် ကလေးအတွက် အားသာချက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ caregiver က ကလေး ငယ်ကို ဘယ်နယ်ပယ်မှာ ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားပြီး ကလေးရဲ့ စိတ်ပါဝင်စား လုပ်ဆောင်မှု တွေကို အခြေခံပြီး စွမ်းရည်တက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ – ကလေးငယ်က ဆေး ရောင်ခြယ်တာ ကစားနေတယ်ဆိုပါစို့၊ ကလေးဆေးခြယ်နေတဲ့အရောင်က အနီရောင်ဖြစ်ပြီး သူဝတ်ထားတဲ့အရောင် ကလည်း အနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ကို ကလေးက သတိထားမိတယ်ဆိုရင် အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ အနီရောင်အရာဝတ္ထု တွေကို လိုက်ရှာခိုင်းတာမျိုးလုပ်ပေးမယ် ဆိုရင် ကလေးအနေနဲ့ အရောင်တွေကို သင်ယူတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
နောက်တစ်ခုက ကလေးအချင်း ချင်း အရုပ်လုရင်း ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ ကစားစရာကို ဘယ်လို ကစားနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုး၊ က လေးတွေကို သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ နား လည်လာအောင် ရှင်းပြပေးတာမျိုးလုပ် ပေးပါ။ ဒါဟာ ကလေးတွေမှာ မိတ္တဆိုတဲ့ Social အပိုင်းမှာ ဖွံ့ဖြိုးလာစေပြီး စိတ်ခံ စားမှု Emotional အပိုင်းမှာလည်း ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။
Categories:	Article	/ No Responses / by Good Health Journal March 25, 2019